Tourism Seychelles Inorovera Kunze kwepagore Mid-gore Kushambadzira Kutaurirana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Tourism Seychelles Inorovera Kunze kwepagore Mid-gore Kushambadzira Kutaurirana
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Tourism Seychelles Kushambadzira Kutaurirana
Tourism Seychelles yakaparura yayo 2021 yegore repakati pegore ongororo uye kushambadzira kubvunzana nevemunharaunda vashanyi vekushanya neChipiri, Chikunguru 27, kuongorora mashandiro enzvimbo kusvika nhasi uye kukurukura nekugadzirisa zvirongwa zvechipiri chikamu chegore.
Kutaurirana uku kwakatanga nehurukuro pfupi negurukota rinoona nezvekunze nekushanya, Ambassador Sylvestre Radegonde.
Secretary-Secretary for Tourism, Mai Sherin Francis, vakapa hurukuro yezano rebazi.
Dhipatimendi Rezvekushanya riri kushanda padyo nevabatanidzi vezvekushanya pamwe nemasangano ehurumende kuongorora zvigadzirwa zvinopihwa muSychelles uye nekupa masevhisi ari nani kuvashanyi vayo.
Seychelles nguva pfupi yadarika yakanyorera vashanyi vayo vepamusoro vhiki nevhiki kubva pakatanga denda muna Kurume 2021, nevashanyi 5,367 muVhiki 29 re2021, kana kungori 22% pazasi peiyo svondo rimwe chete mu2019, vanobata indasitiri vakadzidza.
Yakavakirwa pamusoro pechikuva chikuva ZOOM, kubvunzurudzwa, kunozoitwa mukati memavhiki maviri anotevera, kwakatanga nehurukuro pfupi negurukota rinoona nezvekunze nekushanya, Ambassador Sylvestre Radegonde, kune vanobata indasitiri. muSeychelles uye vashandi veDhipatimendi Rezvekushanya pasirese. Izvi zvakateverwa nekuratidzwa kwechirongwa chebazi neMunyori Mukuru weKushanya (PS), Mai Sherin Francis.
Vachitaura nevashandi vemaindasitiri, Gurukota Radegonde vakaratidza kuti kunze kwedenda riri kuenderera mberi, riri kudzikisira kufamba pasi rese, indasitiri yekushanya yemuno iri kusangana nematambudziko mazhinji, zvichitadzisa kukura kwemaindasitiri. Minister vakapa kuvimbisa kwavo kuti Dhipatimendi Rezvekushanya riri kushanda padhuze nevezvevashandi vekushanya pamwe nemasangano akasiyana siyana ehurumende kuongorora zvigadzirwa zvinopihwa muSychelles uye nekupa masevhisi ari nani kuvashanyi vayo.
Minister Radegonde vakataura kuti iye anokurudzirwa zvikuru nekukura kwakadzikama kwenhamba dzekuuya kwevashanyi, uye kugoverwa kwakaringana kwevashanyi pamatanho ezviumbwa nezvitsuwa zvakasiyana siyana.
Muhurukuro yake, PS Francis akapa muongororwo wepasi rese mamiriro azvino eindasitiri yekushanya yemuno, achitaura pamusoro pesimba rekusagadzikana kwepasirese pahupfumi hweSychelles pamwe nekupa rondedzero yezvaifungidzirwa nenhamba dzevasvika nhasi uye kumberi kubhuka kwakaitwa , iyo inoratidza kukura kunotarisirwa pamusoro pemakamuri maviri anotevera.